'We thank you very much for the Words of God’ - Zimbabwe - Trinitarian Bible Society
'We thank you very much for the Words of God’ - Zimbabwe
Some months ago we granted some Shona calendars to a former missionary to Zimbabwe who is now based in the USA. The following extract comes from her letter of appreciation:
‘It is a joy to send my grateful thanks for the lovely 2017 Golden Thoughts Calendars…in Shona, the language of the people in Zimbabwe among whom we worked as missionaries for many years.
…the Shona calendars have been mailed to those in Zimbabwe and what grateful thanks have come from many there: In their own language of Shona, this is how their thanks have been received. "Tinotenda zvikuru namashoko aMwari aripamakarenda akanaka" (which translated say: "We thank you very much for the words of God which are on these lovely calendars")
Knowing something of the suffering and hardships that they are going through there, I know what a blessing from the Lord these scriptures are to them day by day. So thank you for the blessing you have brought to many hearts both here and those in Zimbabwe through your provision of these "Golden Thoughts Calendars". May the Lord bless you each one.’
‘For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;’ 2 Corinthians 4.17